Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|U-doodista Dhibbanayaasha Dembiyada|Deeqda Caawinta Caddaaladda
Sideed Meelood oo Barnaamij ah
Barnaamijku wuxuu diiradda saarayaa siddeed qaybood oo barnaamijyo ah:
Xeer ilaalinta iyo Maxkamadaha
Ka Hortagga Dembiyada iyo Waxbarashada
Toosinta iyo Toosinta Bulshada
Daaweynta iyo Hirgelinta Daroogada
Qorshaynta, Qiimaynta, iyo Horumarinta Teknolojiyada
Barnaamijyada Dhibbanaha Dhibanaha iyo Markhaatiga (marka laga reebo Magdhawga Dhibbanayaasha)
Barnaamijyada caafimaadka maskaxda iyo barnaamijyada dhaqan galinta sharciga iyo sixitaanka, oo ay ku jiraan barnaamijyada habdhaqanka iyo kooxaha wax ka qabashada dhibaatooyinka
Deeqaha waxaa loo isticmaali karaa:
dacwad soo oogista
dhaqan celinta dambiilayaasha
bixinta gargaarka dhibanaha
Guddiga La-talinta ee Kaalmada Caddaaladda waxay doortaan barnaamijyo loogu talagalay maalgelinta iyadoo lagu saleynayo maalgelinta la odorosay. Waaxdu waxay u xushaa mashruucyo shaqsi ah maalgelinta barnaamijyada lagu taliyay ka dib markii la sii daayo qaddarka abaalmarinta federaalka iyo dib-u-eegista codsiyada mashruuca shaqsiyeed.
Sidee iyo goorta la codsado
Waxaan hadda aqbalnaa soo jeedinta fikradda. Fadlan dhagsii xiriirka hoose si aad u hesho tilmaamaha soo jeedinta fikradda.
link si ay u Gargaarka JAG Fikradda
Fadlan ku soo gudbi dhammaan soo-jeedinta emayl ahaan biil.johnston@commerce.wa.gov. Dhammaan soo jeedimaha fikradda ee la gudbiyey ka hor 30-ka Luulyoth 5:00 galabnimo waxaa dib u eegi doona Gudiga La talinta JAG. Shirka xiga ee guddiga waxaa la qaban doonaa bisha Ogosto.
Gudbinta Cabashada Takoorka ee Ka Dhanka ah Barnaamijyada Deeqda Dawladda Dhexe
Sideen ula xiriiraa Agaasimaha Shaqaalaha?
Soo Jeedinta Fikradda
Waxaan rajeyneynaa helitaanka sanado badan oo deeqda Caddaaladda ee Kaalmada Caddaaladda (JAG) mustaqbalka dhow. Dhammaan soo jeedimaha fikradda ee la soo gudbiyey ka hor 30-ka Luulyoth 5:00 galabnimo waxaa dib u eegi doona Gudiga La talinta JAG. Shirka xiga ee guddiga waxaa la qaban doonaa bisha Ogosto. Fadlan dhagsii xiriirka hoose si aad u hesho tilmaamaha soo jeedinta fikradda.
Xiriirinta Gargaarka JAG Fikradda
Codsiga JAG ee gobolka, oo ka tarjumaya talooyinka Guddiga La-talinta, ayaa la dhammaystiray ka dib markii la sii daayay Waaxda Caddaaladda, tilmaamaha dalabka ee Xafiiska Caawinta Caddaaladda. Codsiga waxaa loo diyaariyey sharci-dejinta iyo dib-u-eegista dadweynaha labadaba, 30 maalmood kahor gudbinta.
wuxuu ka helaa maaliyad barnaamijka JAG si loo wanaajiyo shaqaynta cadaaladda dembiyada iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo xakamaynta maandooriyaha, dembiyada rabshadaha wata, iyo dembiilayaasha halista ah. Ujeedadu waa in la bixiyo lacago loogu talagalay barnaamijyada ku dhaca qaybaha soo socda: fulinta sharciga, dacwad qaadista, maxkamadaha, ka hortagga dembiyada iyo waxbarashada, sixitaanka iyo sixitaanka bulshada, daaweynta daroogada iyo fulinta, qorsheynta, qiimeynta, hagaajinta farsamada, dhibanaha dembiyada iyo dadaallada markhaatiga, iyo barnaamijyada caafimaadka maskaxda, oo ay ku jiraan barnaamijyada habdhaqanka iyo kooxaha dhexgalka dhibaatooyinka.
Fadlan u soo gudbi su'aalaha isku duwaha arjiga iimayl ahaan biil.johnston@commerce.wa.gov ama taleefan ahaan 360-725-3030.
The Edward Byrne Memorial State iyo Foomka Caawinta Sharciga ee Sharciga Deegaanka waxaa la abuuray 1988 waxaana loogu magac daray Congress-ka Grant Byrne Memorial Gargaarka Caddaaladda ee 2008.
Xoog-gaashaan-ku-sheegga Kooxaha Burcad-Badeedda ah ee Xukunka Badan
Caddaaladda Dembiyada ee Gobolka Washington (PDF)
Qiimaynta Ahmiyadaha Caddaaladda Dembiyada ee WA (PDF)
Nidaamyada iyo Nidaamyada JAG (PDF)
Ahmiyadaha Daneeyayaasha Cadaaladda Danbiyada (PDF)
Shuruudaha Diiwaangelinta Dembiilayaasha Galmada (PDF)
Jacob Wetterling Act Guide Guide
Waaxda Caddaaladda Mareykanka
Barnaamijyada Xafiiska Caddaaladda ee DOJ
Sharciga La Xiriira
Deeqda Caawinta Cadaaladda Byrne